Ra’isalwasaare Gaas oo ka hadley mowqifka DKMG ee ciidamada Kenya+VIDEO – SBC
Ra’isalwasaare Gaas oo ka hadley mowqifka DKMG ee ciidamada Kenya+VIDEO
Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas) ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtey magaalada Muqdisho wuxuu si weyn uga hadley arimaha la xiriira faragalinta ciidan ee Kenya ay ku sameysay gudaha Soomaaliya ee ay ku sheegtey inay kula dagaalamayso xoogaga Shabaabka.
Shir jirkan jaraa’id ee maanta qabtey Ra’isalwasaaruhu wuxuu ku sheegay in si buuxda u cad yahay mowqifka dawlada KMG Soomaaliya ee la xiriira ciidamada Kenya wuxuuna sheegay in ay raali ka yihiin ciidamada Kenya inay baacsadaan sida Ra’isalwasaaruhu hadalka u dhigay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab.
Hadalka Ra’isalwasaaraha wuxuu wax weyn ka badalan yahay hadalkii ay shaley isaga iyo Madaxweynuhu ka sheegeen shir jaraa’id oo ay ku qabteen Muqdisho kaasi oo ay ku xuseen in aanu jirin wax heshiis ah oo Kenya & Soomaaliya dhexmarey oo ku aadan hawlgal military oo ay ka fuliso gudaha Soomaaliya.
Hadaba shir jaraa’idkii oo uu ku qabtey magaalada Muqdisho Ra’isalwasaaraha Link hoose hoose ka daawo.
dhamaan wan salamyamshaqalaha sbc shaqada wanaagsan ay dadka uqabtaan waad ku mahad san tihiin